Ciidamo xoogan oo saaka isku hor fadhiya koofurta gobolka Mudug | KEYDMEDIA ONLINE
Ciidamo xoogan oo saaka isku hor fadhiya koofurta gobolka Mudug
Dhaqdhaqaaqyo ciidan ayaa saaka laga dareemayaa degaanno dhaca koofurta Gobolka Mudug.
GAALKACYO, Soomaaliya – Ciidamo xoogan oo ka kala tirsan xoogga dalka Soomaaliya, Daraawiishta Galmudug, iyo dad shacab ah oo is aruursaday ayaa saaka kaaabiga ku haya degaanka Camaara oo dhaca koofurta gobolka Mudug.
Ciidamadan oo shalay sheegay in ay la wareegeen guud ahaan gacan ku heynta magaalada Bacaadweyn, ayaa u ruqaansaday degaannada Caad iyo Camaara, halkaas oo la rumeysan yahay in ay ku xoogan yihiin Kooxda Al-Shabaab.
Sida ay sheegayan dadka degaanka ciidamada huwanta ah, waxaa ku jira kuwo uu Hoggaaminayo taliyihii hore ee Booliska Gobolka Banaadir Saadaq Cumar Xasan, (Joon).
Saraakiisha Howlgalkaan Hogaaminaysa ayaa sheegaya in ciidamo xooggan oo taabacsan Al-Shabaab ay ku sugan yihiin degaanka, taas oo xilli kastaa sababi karta isku dhacyo xooggan.
Ciidamada qaybta 21-aad ee xoogga dalka Soomaaliya, iyo kuwa Daraawiishta Galmudug oo isgarabsanaya ayaa maalmihii la soo dhaafay, waday Howlgallo, ka dhan ah Al-shabaab, Wasiirka Amniga Galmudug, Axmed Macalin Fiqi, ayaana dhawaan sheegay in ay Ciidamada huwanta ku wajahan yihiin degmada Xarardheere.